mercredi, 19 avril 2017 22:52
Morondava : Un culte contre l’Ambalavelona
Les établissements scolaires luttent contre l’Ambalavelona au niveau du Cisco Morondava. Avant d’entamer le troisième trimestre de la période scolaire, les églises réunies au sein de la Ffkm organisent ce jour un culte à l’honneur des enfants scolarisés afin de pourchasser l’esprit du mal qui dérange les étudiants.
De son côté, le Cisco Morondava tente de rassurer que les examens officiels auront bien et bel lieu.
mercredi, 19 avril 2017 22:46
Lions club International : Mivory eto Madagasikara
Nanomboka androany ary haharitra telo andro ao amin’ny hotely Carlton ny fivoriam-be andiany fahatelon’ny fikambanana Lions club International district 403 B2.
Filaharam-be nanoloana ny ranon’Anosy no nentina nanamarihana izany fanokafana izany. 300 mahery no isan’ireo mpandray anjara andrasana amin’ity fivoriana ity ka hoan’ireo vahiny avy any ivelany dia omaly izy ireo no noraisin’ny filoham-pirenena.
Amin’ny andro farany hanaovana ity fivoriana ity ihany koa no marihina fa hanatotosana ny fifidianana izay ho governora vaovaon’ny fikambanana.
mercredi, 19 avril 2017 22:45
Mahajanga : Roalahy raindahiny amin'ny fanendahana sarona
Eny amin'ny Pont Mady sy ny manodidina no tena fanaovan'izy ireo ny asa ratsiny. Nandritra ny fety anefa somary niova toerana teny amin'ny “Bord de la mer” izy ireo nanararaotra ny habetsahan'ny mpitsangatsangana.
Tamin'ny Alatsinainin'ny Paska dia tovovavy roa no lasibatr’izy roalahy ka lasa tamin'izany ny finday avo lenta. Nisy nahatsikaritra ny zava-niseho ka nanaraka azy ireo. Tsy lasa lavitra fa teo amin'ny fiantsonan’ny bus Zotra 7 no tratra izy ireo ary mbola tany amin'izy ireo ny zavatra nangalariny.
Atao famotorana eny amin'ny Polisin'ny Boriborintany Voalohany eny Analakely Mahajanga izy roalahy ireto mialohan'ny hanolorana azy ny Fampanoavana.
mercredi, 19 avril 2017 22:34
Amborovy Mahajanga : Mpangalatra akoho saika matin'ny fitsaram-bahoaka
Fangalarana akoho miisa valo no saika namoizan'ity tovolahy vao 24 taona monja ity ny ainy. Teny am-pilanjana ireo akoho avy nangalariny izy no nifanena tamin'olona, rehefa nanontaniana anefa dia tsy nazava tsara ny valinteniny na entina aiza ireo akoho na ho atao inona fa avy hatrany dia napetrany ary nandositra izy.
Nifanenjehan'ny Fokonolona ary tratra ka niharan'ny hatezeran'ny vahoaka teo. Efa tonga teo rahateo ny tompon'ireo akoho izay nanamarina fa nangalarin'ity tovolahy ity ireo akoho ireo. Raha tsy tonga ny Zandary dia matin'ny olona teo ity farany satria efa voafira famaky ny handriny ankoatra ny daroka nahazo azy.
Ireo Zandary no nitondra azy tany amin'ny hopitaliben'Androva niaraka tamin'ireo tompon'ny akoho ary ny filohan'ny vakim-paritra Ambalabozy-Amborovy Mahajanga.
mercredi, 19 avril 2017 21:51
Hifampitaona eny amin ‘ny Forello Tanjombato indray ny FIM na ny Foire Internationale de Madagascar, izay maharitra efatr’andro ka hanomboka ny faha 18 may 2017 ho avy izao;
Marihina moa fa dia andiany faha 12 ity varotra fampirantina ity ary anisan’ny hampiavaka azy amin’ity andiany ity dia ny fahamaroan’ireo mpandray anjara, raha tsy hilaza afa-tsy ny INJET, ORANGE MADAGASCAR, BNI, Groupe Ma TV sy ireo maro izay tsy voatanisa.
Ary mbola hampiavaka azy ity ihany koa ny fisongadinan’ny vita Malagasy izay tsy dia nisongadina loatra ny fisiany hatramin’izay andiany teo aloha izay.
Koa dia manentana ireo mpanjifa na Malagasy izany na vahiny ho tonga eny amin’ny Forello Tanjombato fa maro ireo zavatra mahasoa any an-toerana.
mercredi, 19 avril 2017 21:33
Ambondrona: Niredareda ny trano
Niredareda ny tranon’olon-tsotra teny amin’ny faritra manodidina an’Ambondrona io maraina io, tsy fantatra mazava izay nahatonga ny fahamaizana fa dia efa ny olona nijery ny afo milelalela tazana teny.
Minitra vitsy monja anefa dia efa maty ilay afo fa dia voavonjin’ireo mpiara monina ihany na dia efa tonga tara aza ireo mpamonjy voina.
Ity tokoa zany no tonga amin’ilay fitenenana hoe « May Ambondrona ».
mercredi, 19 avril 2017 21:18
Ivato Centre-Ambositra : Mpanao trafika basy tratra niaraka tamin’ny kalaky sinoa
Lehilahy iray no voasambotry ny Zandary tany Ambalamarina, Kaominina Ivato Centre, Distrika Ambositra ny 13 aprily lasa teo noho ny fivarotana sy fitazonana basy tsy ara-dalàna.
Tra-tehaka tamin’izany koa ny basy “Fusil d’assaut chinois (FAC)” na kalaky sinoa iray niaraka tamin’ny tranom-bala miisa roa ary bala 7,62mm miisa 60.
Nanonona vehivavy iray izay mpanaparitaka ireo basy ireo izy rehefa nofotorana ka nosamborin’ny Zandary tany an-toerana ihany koa io.
Nilaza ho tsy salama anefa ila ramatoa ka nampidirin’ny mpitsabo hopitaly saingy ambenan’ny Zandary ary hotohizana ny famotorana azy rehefa afaka atao izany. Natolotra ny Fampanoavana androany 19 aprily tao Ambositra ilay lehilahy voasambotra.
Basy miisa telo tamin’ity karazany FAC tratra ity no azon’ny Zandary tao Amoron’i Mania teny an-tanan’ny jiolahy hatramin’ny fiandohan’ity taona 2017 ity, niampy MAS36 iray sy bala maro.
mercredi, 19 avril 2017 20:00
Sambava : Misavorovoro ao amin'ny Cisco
Fahaverezana ordinatera tao amin'ny toeram-piasana no fototry ny olana. Nitondra ny raharaha teny amin'ny mpitandro ny filaminana ny sefo Cisco.
Mpiasa miisa sivy no natao famotorana, avy eo natolotra ny Fampanoavana. Nahazo fahafahana vonjimaika avokoa izy ireo, miandry fitsarana amin'ny 6 jolay 2017.
Raisin'ny mpiasa ho fanendrikendrehana no natao amin'ny mpiara-miasa amin'izy ireo. Nisy ny petadrindrina eo amin'ny biraon'ny Cisco, filazana fanairana ka mila andraisana fepetra haingana.
mercredi, 19 avril 2017 15:49
Faha-50 taonan’ny AKADEMIA Miaramila : Nifarana tamin’ny fifaninanana ara-panantanjahan-tena ny “Critérium 2017”
Nifarana ny zoma 14 aprily teo rehefa naharitra ny herinandro ny “Critérium 2017” teo anivon’ireo sekolin’ny Tafika, nokarakarain’ny Akademia Miaramila Antsirabe.
Tafiditra tao anatin’ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny ACMIL rahateo ny hetsika ka sekoly fanofanana niisa 5 teo anivon’ny foloalindahy no nanana solontena niatrika izany, nahitana ny ACMIL mpampiatrano, ny Sekoly ambonin’ny Zandarimaria Moramanga, ny Sekolin’ny Etamazaoro, ENSOA Antsirabe ary ny SEMIPI Fianarantsoa.
Nambaran’ny kolonely Ramasy Razafindratovo Heritiana, Komandin’ny ACMIL fa fahombiazana tanteraka ny hetsika ary nampiray ny Tafika.
Taranja maro moa no nifaninanana toy ny Basket, foot-ball, Volley-ball, Atletisma, Tsipy kanetibe ary ny tenisy.
mercredi, 19 avril 2017 15:33
Antsirabe taorian’ny PAKA: Aman-taoniny ny loto, feno diky ny vodihazo rehetra
Roso amin’ny asa fanadiovana ny Tanànan’Antsirabe taorian’ny fetin’ny Paka. Natomboka teny amin’iny manodidina an’Antsena Sabotsy ny fanadivoana, niitatra tao Antsenakely sy ny Araben’ny Fahaleoevantena ; nanampy ny Kaominina tamin’izany ny Fiangonana Apokalipsy.
Naloto ny Tanàna, miparitaka ny diky sy ny amany, vokatry ny tsy fahampian’ny foto-drafitrasa natokana ho an’izany. Tsy ampy rahateo ny fanentanana mikasika ny fitandroana ny fahadioavana.